Busquets Oo Ka Hadlay Guul la’aantii Kooxdiisa Ee Sevilla iyo Cidda Uu Eedda Saaray
HomeWararka MaantaBusquets Oo Ka Hadlay Guul la’aantii Kooxdiisa Ee Sevilla iyo Cidda Uu Eedda Saaray
Laacibka Khadka dhexe uga ciyaara Barcelona ee Serio Busquets ayaa ka hadlay ciyaartii ay kooxdiisu xalay barbar dhac 2-2 la gashay Sevilla, taas oo la arkayey ciyaartooyada oo madaxa hoos u foorarinaya oo garoonka ka baxaya markii ay ciyaartu dhamaatay.
Laba gool oo ay Barcelona u dhaliyeen qaybtii hore ee ciyaarta xiddigaha Lionel Messi iyo Neymar ayey in badan ku naaloonayeen reer Catalonia, waxaase laga daba yimid qaybtii dambe oo laga dhaliyey laba gool, taas oo ciyaartana ka dhigtay in ay dhibacaha wadaagaan labada kooxood. Barbar dhacan ayaa waxa uu soo yareeyey dhibcihii ay Barcelona ku hoggaamineysay horyaalka oo ahaa 4, waxaanay hadda 2 dhibcood ka sarraysaa Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta, isla markaana 3-0 ku garaacday Eibar oo ay Sabtidii wada ciyaareen.
Haddaba, laacibka Serio Busquets oo warbaahinta la hadlay markii ay ciyaartu dhamaatay ayaa dhalleeceeyey ciyaartooyada kooxdiisa oo uu sheegay in ay masuul ka ahaayeen wixii garoonka ka dhacay, haddana marka la eego sidii ay ciyaartu ahayd ay ku adkayd in ay is difaavaan.
“Dhamaan kooxda ayaa iska leh eedda goolka koowaad ee la naga dhaliyey, waxaanu ahaa khalad aanu samaynay. Ciyaaro adag ayaa noo hadhsan, Real Madrid laba dhibcood ayaanu ka sarraynaa haddiise hal kulan la naga badiyo waa lanagala wareegayaa hoggaanka, markaa waa khasab in aanu badino dhamaan ciyaaraha noo hadhsan.” Sidaas ayuu yidhi Busquests.
Jadwalka ciyaaraha Barcelona ayaa aad u adag marka la barbar dhigo Real Madrid. Arbacada waxay magaalada Paris kula soo ciyaari doontaa PSG oo ay ku kulmi doonaan ciyaarta koowaad ee Champions League, Sabtida toddobaadka soo socdana waxay wada ciyaari doonaan Valencia, halka Salaasada ku xigtana ay is haleeli doonaan PSG oo ay lugta labaad ku wada ciyaari doonaan Camp Nou.
Manchester United Oo Heshiis La Galay Zlatan Ibrahimovic
England vs Brazil 0-0 – Extended Match Highlights – Friendly
Albania Oo Ku Tumatay Romania Kuna Rajo Weyn Inay U Baxdo Wareega 16 Dhamaadka